MARKAB SIDA 30 TAANGI: Oo ay haystaan burcad-Badeedka Soomaaliya | Wargeyska Xog-Ogaal
MARKAB SIDA 30 TAANGI: Oo ay haystaan burcad-Badeedka Soomaaliya
Waxaa la shaaciyay in Markab siday ilaa 30 Taangi oo ah nooca (T-72 sawirka hoose) uu gacanta ugu jiro Burcad-badeedka Soomaalida ee Gobolka la magac baxay Puntland. Markabkan oo sida la sheegay laga leeyahay Dalka Yukreen (Ukrain) waxaa saaran saanad Ciidan oo ay ku jiraan ilaa 30 Taangi, dayactirkoodii iyo qalabkaloo ciidan. lama oga halka ay la aadeen Markabkaan burcadii af-duubka u qabsadey inkastoo loo maleynayo inay ku sugan yihiin xeebta Waqooyi bari ee Soomaaliya halkaa oo ayaamahaan saldhig u aheyd burcad-badeedka Soomaaliyeed.
Markabkaan oo lagu wadey inuu ku xirto Dekeda Mombasa Kenya oo uu Qalabkan ay Taangiyadu ku jiraan luga dajin lahaa, waxaana markaa kadib xagga dhulka loo sii marin/gudbin lahaa Koonfurta Suudaan oo loo wadey.
SIda caadiga ah Burbadeedka Soomaalida ah waxay dalbadaan madax-furasho mar marka qaar Malaayiin Doolar ah inta badan waa la siiyaa! lacagta ay dalbadaan. laakiin markabkaan ayaa loo maleynayaa in uu xaalkiisu ka duwanaan doono, maadaama uu sido qalab Ciidan, oo waxaa lagaba yaabaa in burcad-badeedka laftoodu damac ka galo. haddiiba ay noqoto in madax-furasho lagu dhameeyo xaalka waxay noqon kartaa mid la siiyo burcad-badeedka lacag aad u fara badan !, aan ka war dhowrno.
Haddii ay Shixnadaan ka kooban 30ka Taangi gaarto Koonfurta Suudaan, See loo isticmaali lahaa ? Dagaal sokeeye
BURCADII OO DALBADEY $35 milyan.:
Nin u hadley Burcadii af duubka u qabsadey Markabkaan Hubka sida oo hadley BBC qaybta Af-Soomaaliga ayaa sheegay in haddii nala heshiiyaan dadka iska leh ay doonayaan lacag, Marla waydiiyay intee baad ku sii daynaysaan wuxuu sheegay waxaan ka rabnaa ugu yaraan 35 milyan oo doolar.
La soco hadba wixii soo kordha …………………..
This entry was posted in Wararka Dalka on 09/26/2008 by Abdirasak.
← DHAQAALAHA MAREYKANKA: oo hoos u dhacey ! SH.XASAN TURKI: SH. Shariif qadka ayuu ka baxey! →